कोलोराडो घुम्न जाँदा-१,(बासु श्रेष्ठ)
मे २४ २००८
अमेरिका आएदेखि नै अमेरिकी राज्यमध्येको एक कोलोराडोले नेपालको झझल्को दिन्छ भनेको सुनेको थिएँ । तर त्यता जान भने ठिक समय आईपुग्न निकै समय लाग्यो । उता कोलोराडो निवासी दाई योग प्रसाद श्रेष्ठको निकै लामो समयदेखि 'एकपटक हाम्रो ठाउँपनि हेर्न आउ न! ' भनिरहनु हुन्थ्यो । त्यसैले 'अब त जानै पर्यो' भनि मसक्क आँटेर मे २४ मा डेल्टा एयरलाईन्सको टिकट किनें र लागें एयरपोर्टतर्फ ।
वासिँगटन डिसीबाट २.५५ मा उडेको जहाज ठिक ४.१२ बजे एटलाण्टाको विमानस्थलमा अवतरण गर्यो । यहाँबाट डेनभरकोलागी ७.00 बजेमात्र उडान भएकोले साथमा ल्याएको ल्यापटपको सदुपयोग गर्न थालें । विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्नेवित्तिकै मलाई एयरपोर्ट पुर्याउन आएको छोरालाई मैले फोन गरेर आफ्नो यात्रा अद्यावधि गराउँदा उ अझै घर पुगिसकेको छैन रहेछ । ट्राफिकको कारणले आधा घण्टाको बाटो एक घण्टा भन्दा बढि समय लागेछ । मैले भने झण्डै आठशय माईलको यात्रा तय गरिसकेको थिएँ । विज्ञान र प्रविधिको यस देनप्रति मनमनै धन्यवाद दिँदै अर्को उडानकोलागी प्रतिक्षा गर्दै यो संस्मरण टाईप गर्न बसेँ ।
घरबाट एयरपोर्ट जाँदा जाँदै नै दाईले कोलोराडोबाट फोन गरेर मेरो हालखबर सोध्नुभयो । मनमनै वहाँको म प्रतिको सद्भाव र प्रेमप्रति दँग परे । तरपनि भर्खर नेपालबाट आउनु भएको मित्र राजु तुलाधर र सकसजीलाई घरमा छोडेर आफु हिँड्न परेकोमा भने मन खल्लो भई नै रहेको थियो । कोलाराडोको यात्रा तय भईसकेपछि वहाँ आउने कुरा थाहा भयो जुन अलि ढिलो नै भयो मेरो यात्रा परिवर्तन गर्न । जे होस फर्केपछि धोको पुग्नेगरि कुरा गरौँला भनेर यात्रा शुरुगरेपनि मनमा कता कता नमज्जा नै लागीरहेको थियो । राजुजीलाई वहाँको भाई सुजन र सकसजीलाई वहाँको मित्र किशोरले मकहाँबाट लैजाने कुराको टुँगो लागेको थियो ।
एटलाण्टाबाट ठिक सातबजे बेलुका उडेको हवाईजहाज तीनघण्टा बीस मिनेटपछि कोलोराडोका डेनभरमा ओर्लियो । झण्डै ३७ हजार फिटको उँचाईमा प्लेन उड्दा मात्र हलुका पेय पदार्थ र झण्डै दश दाना जति भएको साना बदामका पोका दिईदो रहेछ । अनि डेल्टाको कँजुस्याँईप्रति खिन्नपनि माने । तर व्यापार भनेको नै यहि हो शायद । नत्र मुनाफा कमाउने कसरी र त डेल्टा एयरलाईन्सको सेवा विभिन्न देश तथा शहरहरुमा विस्तार भएको छ । त्यसैले होला शायद एटलाण्टाको रन वे मा म चढेको जहाज पछिपछि अरु पाँच सातवटा लहरै भुँई छोड्न आतुर थिए र म चढेको जहाजभन्दा अगाडि पनि एकपछि अर्को धमाधम भुँई छोड्दै थिए ।
जे होस् डेनभरमा ओर्लिएर आफ्नो सामान लिएपछि दाईलाई फोन गर्दा वहाँ घरबाट मलाई लिन भनि निस्किई सक्नुभएको रहेछ । कहाँ कसरी कुरी रहने भन्ने अर्हाउनु भयॊ र त्यहि बमोजिम कुरेको पाँच मिनेटपछि आईपुग्नुभयो । वहाँको भ्यानमा फ्यात्त फाले आफुलाई । बाटोमा विभिन्न प्रकारका कुरागर्दै म दाँया बाँयापनि हेर्दै थिएँ । मलाई यसरी दृश्यावलोकन गर्न मनलाग्छ । निमेषभर भएपनि हरेक स्थानमा आँखा टाँस्न मन लाग्छ । सकेसम्म त्यसको सम्झना साँच्न मन लाग्छ । चारैतिर जता हेरेपनि मैदान नै मैदान । रुख पात भनेको छँदैछैन । खुल्ला मैदानमात्र । मलाई कता कता तराईको सम्झना गरायो यसले । पथलैयाबाट विरगन्जको बाटोमा देखिने मैदान जस्तो । फेरि मेरो कल्पनाको विपरित । सोचेको थिएँ डेनभर पहाडै पहाडले घेरिएको होला । अनि कुनै पहाडको विचमा होला डेनभर एयरपोर्ट । एयरपोर्टबाट घरको बाटो घुमाउरो ओकाली ओराली होला आदि आदि भन्ने कल्पना गरेको मनले वास्तविकता अर्कै देख्दा कस्तो गलत अनुमान लगाइएको रहेछ भनेर आफै मनमनै छक्क परेँ ।
घरमा पुगी भाउजु अनि सबैसँग भेटघाट र भलाकुसारी खानपिनपछि ओछ्याउन समाउँदा रातको साढे एघार भईसकेको थियो तर मेरो घडीमा भने साढे एक भईसकेको थियो । अर्थात यदि म वासिँगटन डिसीमा हुँदो हुँ त यतिखेर मेरो एक निद्रा पुगी सक्ने थियो । तर डेनभर आईपुग्दा मैले दुईघण्टाको नाफा गरेछुँ ।
त्यसैले त एटलाण्टाबाट पश्चिम हान्निएको ल्पेन जतिजति घाम डुक्न खोज्छ उति उति घामलाई पछ्याउँदै थियो । डुब्न लागेको घामलाई पश्चिम हान्निदै समाउन खोज्दै थियो तर प्रकृतिसँग मानवको के बल ? घाम आखिर डुबेरै छोड्यो र ल्पेन डेनभरमा ओर्लदा क्षितिजमा सूर्यको केहि मधुरो लालीले भोलि भेटौला भन्दै बाई बाई गर्दै थियो ।